Ukuphunyuka Okudala KuTarkov Hack 🥇 Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Classic Ukuphunyuka KuTarkov Hack
Bobabili abadlali babantu nama-scav bots ngeke babe sethubeni lapho leli thuluzi linikwe amandla.
Bona ukuthi kungani abantu abaningi bephendukela kuleli thuluzi - Thenga ukhiye womkhiqizo wosuku olungu-1 namuhla!
Usuku olulodwa alwanele iningi labasebenzisi bethu, futhi siyaqonda ukuthi kungani - Thenga ukhiye woMkhiqizo weviki elingu-1 namuhla!
Ufuna ukuba yilungu eliqinisekisiwe leGamePron? Thenga ukhiye womkhiqizo wenyanga engu-1 namuhla!
Siluhlobo oluthile lokuzalela lapha eGamePron - usukulungele ukuba yingxenye yalokho?
Ukubalekela iTarkov Classic Hack Imininingwane
Ukuphunyuka eTarkov kuvame ukubekelwa labo abafuna ulwazi olunzima kakhulu, ngoba noma ngubani onentshisekelo yokudlala “imidlalo elula” angangcono ngokunye okuthile. Kufanele ulayishe isikhwama sakho bese uphuma uye e-Raid ngayo yonke imishini, okusho ukuthi ukufa kungasho ukuphela kokubusa kwakho kwe-EFT! Usebenzisa izibonelelo zethu ze-EFT Classic Hack ufinyelela kwezinye zezinto ezinamandla kunazo zonke ezake zatholwa ekukhohliseni, okusho ukuthi uzokwazi ukuqoqa impango ebaluleke kakhulu nganoma isiphi isikhathi. Noma ngabe i-AI noma i-Human Scav ifuna ukukukhipha, ukusebenzisa i-EFT Classic Hack yethu kufanele.
IWindows 10 (1903-20H2)
Lokhu kugenca kufaka i-Enemy ESP, Info, nezinye izinketho ze-ESP (ama-Bots, Izinto, nama-Exit Gates) enza amaRaids akho abe lula kakhulu. I-Aimbot ifakwe izinto eziningi eziwusizo ezinjenge-Aim FOV noma i-Smooth Aiming, futhi ungazuza nomsebenzi we-Removals nawo! I-Instant Bullet Mod ne-Infinite Stamina nazo zikhona.
Imininingwane yesitha (ibanga / igama)
Phuma emasangweni ESP
I-FOV namanani abushelelezi enziwa ngezifiso
Mayelana Nokweqa eTarkov Classic
Labo kini abaye bagenca esikhathini esedlule kungenzeka bayazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukukhetha ithuluzi elifanele, njengoba kungumahluko phakathi “kokuphila noma ukufa” ezimweni eziningi. Usebenzisa izibonelelo ze-EFT Classic ukufinyelela kwezinye zezici ezinamandla kunazo zonke ezake zenziwa ngokukhohlisa, kodwa sikwenza ngendlela ephephile. Ungasakaza ngenkathi usebenzisa le nkohliso, njengoba iHack UI izofihlwa kubabukeli bakho! Ukukopela kwangaphandle okulula ukukusebenzisa, okusho ukuthi kubaduni nabaqalayo abanolwazi bangazuza kuleli thuluzi elimangalisayo! Akusebenzi kwimodi yesikrini esigcwele, futhi i-HWID Spoofer kuzofanele ithengwe ngokwehlukile.
Kungani usebenzise i-Escape from Tarkov Classic ngaphezulu kwabanye abahlinzeki?
Kukangaki wehliswa abanye abahlinzeki? Uma lesi isikhathi sakho sokuqala uthenga ukhiye womkhiqizo kithi lapha eGamePron, wenze ukhetho olufanele! Akekho omunye umakhi laphaya onentshisekelo yokusiza umsebenzisi, noma ngabe yini. Okuza kuqala kithi kuzohlala kunjalo, okunikeza amakhasimende ethu umuzwa omuhle kakhulu wokugenca. Lapho ufuna ukwazi ukuthi imali yakho isetshenziswa endaweni efanele, ukuthenga i-EFT Classic Hack yethu kufanelekile ngokuphelele. Ukusaphaza imali ngama-hacks okungenzeka ukuthi akwenze uvinjelwe noma kunjalo manje sekuyinto yesikhathi esidlule!
Njenganoma iluphi olunye uhlobo lokuncintisana, ukwenza ukulungiswa kuzoba yinto ojwayelene nayo ngokuhamba kwesikhathi. Kukhona amanye ama-hacks ngaphandle lapho anganikeli ngemenyu engaphakathi kwegeyimu, okusho ukuthi uzodinga ukwenza lonke ushintsho lwakho ngaphambi kokuthi kuvulwe i-hack uqobo. Lapho unemenyu yomdlalo ongancika kuyo, hhayi kuphela ongagcina umdlalo uvulekile ngenkathi wenza izinguquko, kepha kusho ukuthi kuzocishe kube yinto engenakwenzeka ukubanjwa nokugenca. Ukuguqula nokuvala kungenzeki akukaze kube lula kanjena, siyakuthembisa!
Thenga ukhiye womkhiqizo ofanelana kahle nezidingo zakho bese ugenca kuze kube yilapho usutholile ukuwina usebenzisa i-EFT Classic!
Ilungele Yengamela nge-Escape yethu eTarkov Classic Hack?